ဧည့်ခန်းကို လင်းထိန်စေရန် ဖန်ကမ္ဘာလုံး မီးချောင်းများ လောင်းကစား Bezzia
မာရီယာ vazquez | 19/11/2021 18:00 | အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ
အခြားရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ဧည့်ခန်းကို မီးထွန်းပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအထဲမှာ တခြားသူတွေထက် ပိုထူးခြားတဲ့ တချို့က အမြဲရှိနေတယ်။ စက်လုံးပုံသဏ္ဍာန် မှန်မီးချောင်းများသည် အထူးခြားဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ဧည့်ခန်းမှာ မီးချောင်းတွေကို အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖန်ကမ္ဘာလုံး မီးချောင်းတွေက အလောင်းအစားကြီးပါပဲ။
ဤမီးလုံးများသည် မည်သည့်နေရာနှင့်မဆို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော်လည်း အထူးသဖြင့် တောက်ပနေပါသည်။ ဂန္တဝင်နှင့် ခေတ်ပြိုင်ပတ်ဝန်းကျင်များ။ ၎င်းတို့သည် မတူညီသောပုံစံများကို ယူနိုင်သည်။ မီးပဒေသာမီးကဲ့သို့ ပြုမူပါ သို့မဟုတ် အမှီအခိုကင်းစွာဖြင့် ကြီးမားသော စက်လုံးများဖြင့် ရပ်တည်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီကို သင့်ဧည့်ခန်းမှာထားဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာဆိုတာ သင်သိပါသလား။
ဧည့်ခန်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ကမ္ဘာလုံးမီးခွက်ကို ရွေးချယ်ရန် မလွယ်ကူပါ။ ယင်းအတွက် အကြောင်းပြချက်တစ်ခု ရှိသည်- ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ. သို့သော် ယနေ့ပုံများသည် သင့်အား စိတ်အားထက်သန်စေပြီး သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာချနိုင်ရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ဒီဆောင်းပါးရဲ့အဆုံးမှာ သင်ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာ မသေချာဘူးဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ သင်မလိုချင်ဘူးဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ တခါတရံမှာ ပထမလိုပဲ အရေးကြီးတယ် ၊ သဘောမတူဘူးလား။
3 ဆိုဖာဘေးတွင် ကြမ်းပြင် မီးလုံးများ
ကော်ဖီစားပွဲပေါ် ဧည့်ခန်းအလယ်မှာ ဒီမီးခွက်ကို ထားလိုပါသလား။ အကယ်၍ သင်သည် ဤမီးအိမ်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဧည့်ခန်းကို လင်းထိန်စေလိုပါက တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လောင်းခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် မီးခွက် အခန်းထဲမှာ အရေးကြီးဆုံးက အပန်းဖြေဖို့နဲ့ အနားယူဖို့ ဧရိယာကို ဖက်တွယ်ထားတယ်။
ဤစာပိုဒ်အပေါ်ရှိ မီးလုံးများအားလုံးတွင် လက်များနှင့် မတူညီပါ။ စက်လုံးပုံသဏ္ဍာန်ရှိ ဖန်မီးခွက်များ သို့သော် ၎င်းတို့သည် အလွန်ကွဲပြားပါသည်။ ပိုသပ်ရပ်သောအသွင်အပြင်နှင့် သေးငယ်သော စက်လုံးများသည် ခေတ်မီပြီး ဆန်းပြားသောနေရာများကို အလှဆင်ရန်အတွက် စံပြဖြစ်ပြီး ပိုမိုသပ်ရပ်သော သို့မဟုတ် ပိုစုဆောင်းထားသောပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အလယ်အလတ်စက်လုံးများဖြင့် မီးချောင်းများသည် ပိုမိုရှေးရိုးဆန်သော သို့မဟုတ် သက်တောင့်သက်သာရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် စုံလင်စွာကိုက်ညီပါသည်။
ဤဖန်ကမ္ဘာလုံးမီးလုံးများထားရှိရန် အကြိုက်ဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုမှာ ထမင်းစားခန်းဖြစ်သည်။ ဧည့်ခန်းနှင့်ထမင်းစားခန်းသည် အိမ်တွင်နေရာယူထားပြီး နောက်တစ်ခုအား အာရုံစိုက်လိုပါက ထမင်းစားစားပွဲပေါ်တွင် ဤအမျိုးအစားဆီမီးတစ်ချောင်းတင်ခြင်းက သင့်အား ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ မီးအိမ်နဲ့တူပေမယ့် မျက်နှာကျက်နှင့် ဝေး၏။ စားပွဲနှင့် ပိုနီးသည်၊ သေချာသည်မှာ၊ ထမင်းစားသူများသည် သက်တောင့်သက်သာ ဆက်ဆံခြင်းကို တားဆီးခြင်းမပြုဘဲ၊
ဧည့်ခန်းမှာ မီးအလင်းရောင်ကို ပိုရှာနေသကဲ့သို့ ထမင်းစားခန်းမှာ အလင်းရောင်က စားပွဲပေါ်ကျသွားတာ လုံလောက်ပါတယ်။ အကယ်၍ စားပွဲသည် အလွန်ရှည်ပါက၊ ရှည်လျားသော မီးအိမ်တစ်ခု သို့မဟုတ် လောင်းကစားပြုလုပ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တူညီသော မီးချောင်းများစွာကို တပ်ဆင်ထားသည်။ အမြင့်များဖြင့် ကစားသည့် စက်လုံးတစ်ခု။ ၎င်းသည် အဝိုင်းဖြစ်ပါက ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးတစ်ခုတည်းရှိသော ဆီမီးလောင်းခြင်းစိတ်ကူးကို ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သော်လည်း မြောက်မြားစွာသော "cascading" စက်လုံးများ။
ဆိုဖာဘေးတွင် ကြမ်းပြင် မီးလုံးများ
အခုအချိန်အထိ မျက်နှာကျက်မီးအိမ်တွေအကြောင်း ပြောနေကြပေမယ့် လည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဖန်ခွက်များဖြင့် ကြမ်းပြင်များ။ ပြီးတော့ ဒါတွေက ဆိုဖာဘေးမှာထားဖို့ ပြီးပြည့်စုံပြီး သက်တောင့်သက်သာစာဖတ်နိုင်စေဖို့ ဒါမှမဟုတ် ပိုရင်းနှီးတဲ့လေထုကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ဒီနေရာအတွက် အချိန်မှန်အလင်းရောင်ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဤမီးလုံးအမျိုးအစားများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ရွှေရောင်အချောထည်နှင့် အဖြူရောင် စက်လုံးသုံးလုံးအထိရှိသည်။ မတူညီသော အမြင့်များနှင့် လမ်းကြောင်းများတွင် ထားရှိပါ။. ၎င်းတို့သည် ပထမပုံနှစ်ပုံတွင် သင်မြင်ရသည့်အတိုင်း ဤအရာများပါရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် သင်ညွှန်ကြားနိုင်သော မီးလုံးများမဟုတ်ပေ။ အခြားအမျိုးအစားများနှင့်မတူပါ။ မတ်တပ်ရပ်မီးခွက် ဤရွေ့ကား စက်လုံးများ၏ အလေးချိန်ကို ထောက်ထားနိုင်သော အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုး လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသော မီးချောင်းများကို ရှာဖွေရန် မလွယ်ပါ။
ဖန်ကမ္ဘာလုံး မီးချောင်းများသည် ဧည့်ခန်းကို လင်းထိန်စေမည့် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် သင်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။ အထူးသဖြင့် ၎င်းသည် ကြီးမားသော စက်လုံးများပါသော ဒီဇိုင်းမျိုးဖြစ်လျှင် ဤအမျိုးအစားထဲမှ တစ်ခုကို ဧည့်ခန်းထဲတွင်သာထားရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ ထိုထောင့်ကို အာရုံစူးစိုက်မှုဆွဲရန် ကိရိယာကောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း » အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ » ဧည့်ခန်းကို လင်းထိန်စေရန် ဖန်ကမ္ဘာလုံး မီးချောင်းများ လောင်းကစားပါ။
ဘယ်ဟာ အရင်လုပ်မလဲ၊ သွားတိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် သွားပွတ်ကြိုးထိုးတာလား။